I-Wavelength: UV-C kunye ne-UV-A
Namhlanje, UV LED+Photocatalyst is an emerging and encouraging technology for indoor air purification and decontamination using TiO2 as a catalyst under the illumination of UV LED.
Ngoko ke, UV LED+Photocatalyst technology is becoming a popular sterilization solution.
Ke ngoko, ifilimu yenethiwekhi yeTiO2 / AC yenziwa ngokufakwa kwezinto yinxalenye yemitha ye-TiO2 kumphezulu wekhabhoni esebenzayo, ukuze iphelise i-HCHO ngokufanelekileyo.
1. Icebo lokucoca iTio2 lalingu irhasiweyo yi-UV LED Strip (UVA + UVC), eya kuthi ibangele umphumo weFotocatalyst.
2. Ngaphantsi kwesiphumo seFotocatalyst, iarhente enamandla ye-oxidizing OH + iyaveliswa.
3. I-OH + qalisa ukujikeleza kwaye itshabalalise izinto ezinobungozi.
4. Zonke izidalwa ezisekwe kwikhabhoni, kubandakanywa iintsholongwane, intsholongwane, umsi, i-formaldehyde, umungu, iingcongconi, njalo-njalo, ziya kubanjelwa kwi-H2O kunye ne-CO2.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya, okanye ungathanda ukwenza isisombululo sakho sokwenza isisombululo, Nceda ushiye umyalezo wakho kwingxoxo enzulu.
Esona sikhokelo somthengi sokugqibela ekuthengeni kwakho kwee-UV
Isisombululo esisebenzayo se-UVC ye-UVC ye-HVAC Units